Shirka midowga musharixiinta madaxweynaha oo maanta la soo gabagabey-nayo . | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Shirka midowga musharixiinta madaxweynaha oo maanta la soo gabagabey-nayo .
Shirka midowga musharixiinta madaxweynaha oo maanta la soo gabagabey-nayo .
Maanta ayaa lagu wadaa in magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyo shir qaatay muddo saddex cisho ah oo ay lahaayeen siyaasiyiinta mucaaradka iyo musaharixiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya oo saluugsan sida ay dowladdu u maamuleyso doorashada.
Maqaal horeRobab weli ka Da’aya Boosaaaso oo sababay in ay uu Xremo Ganacsiga isku socodka dadka & Gaadidka
Maqaal XigaFaahfaahin ka soo Baxeyso Weerar Lagu qaaday saldhig Ciidaanka Kenya .